Teknoloji - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 Agoosto, 2014, 17:57 GMT 20:57 SGA
Microsoft oo gadatay shirkadda mobilada ee Nokia iyo warar kale.
Nin waqti yar gudahood ka taajiray Paypal haddana meel cidlo ah ku soo dhacay.
19 Luulyo 2013
Wararka teknoljiyadda todobaadkaDaawo01:51
12 Abriil 2013
Wararka tiknoolajiga ee toddobaadka ee BBC
29 Maarso 2013
Barnaamijka wararka teknolojiyadda ClickDaawo02:02
Click, waa barnaamij ay BBC dadwaynaha ugu soo gudbiso
22 Maarso 2013
Dadka filimada soo dejiya oo la ganaaxayo, telefon hawada ku qarxay iyo warar kale.
1 Maarso 2013
Apple oo loo dhacay, China oo si kulul u beenisay iyo warar kale.
23 Febraayo 2013
Koox digniin bixisay khudbaddii Obama, Telefon 10 kun oo dollar ah iyo warar kale.
17 Febraayo 2013